Chate Sat | Reliable freelancers for your business Freelance... - Chate Sat | Reliable freelancers for your business
Freelance ပရောဂျက်များဖြင့် သင်ရဲ့ Portfolio ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ? [Part 2]
♦️ Include The Most Important Elements
Portfolio ဆိုတာ အရင်ပြီးခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေနှင့် Project တွေကိုပဲ ထည့်ထားတဲ့ Collection တစ်ခု မဟုတ်ပါ ဘူး။ တကယ်တော့ Portfolio တစ်ခုဟာ သင့်ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အထင်ကြီး လေးစားမှု ရရှိစေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့တူပါတယ်။ သင်ဟာ Client တစ်ယောက်က ငှားရမ်းဖို့ စောင့်နေတဲ့သူ (သို့မဟုတ်) Client က ကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်နှင့် စိမ်းတဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Portfolio ကို ပေါင်းကူးတံတား တစ်ခုကဲ့သို့ သေချာစွာ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (သင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ ပြောဖို့ထက် သူတို့အတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲ ဆိုတာ ပြောဖို့ကပိုပြီး အရေးကြီးပါတယ်။)
♦️ Add “PRACTICE” Projects
Portfolio ထဲကို Paid Project တွေကိုပဲ မထည့်ပါနဲ့။ ကျောင်းမှာလုပ်ရတဲ့ Projectတွေ၊ Training Course တွေ အတွက်လုပ်ရတဲ့ Project တွေကိုလည်း ထည့်သင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကို ရင်းနှီးပြီး ဆောင်ရွက် ထားသမျှ Project တွေအားလုံးကို ထည့်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ - သင်ဟာ Web Designer တစ်ယောက်ဆိုလျှင် တစ်ခြားနာမည်ကြီးသော Website တစ်ခုရဲ့ Design ကို ပြန်ဆွဲပြထားမျိုး၊ Developer တစ်ယောက်ဆိုရင်လျှင် လည်း Functions များစွာပါသော Website ကိုဖန်တီးပြတာမျိုးတွေနှင့် Designer တစ်ယောက်ဆိုလျှင် မိမိ Idea နှင့် ရေးဆွဲထားသော Designတွေ၊​ Manipulations လုပ်ထားတဲ့ Design တွေကိုပါ Portfolio ထဲမှာ ထည့်သွင်း တည်ဆောက်သင့်ပါတယ်။
♦️ Which kind of format should I use to createaPortfolio?
သင်ရဲ့ Portfolio ကို Online ရော၊ Offline ပါဖန်တီးထားနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါတယ်။ Offline အနေဖြင့် ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့ MS Word တို့၊ PDF format ဖြင့်သိမ်းဆည်းခြင်းဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ Online အနေဖြင့် ဖန်တီးလိုပါက Wordpress ကဲ့သို့သော CMS များကို အသုံးပြုပြီး ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ Wordpress ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် အများကြီး သိစရာမလိုသော်လည်း Web နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အခြေခံလောက် သိလျှင်ရပါတယ်။ Wordpress နှင့် ပတ်သတ်သော Free Tutorials တွေလည်း များစွာရှိသောကြောင့် Portfiolio Website တစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည်များစွာအခက်အခဲရှိမည်မဟုတ်ပေ။
♦️ Why you should start before your portfolio is ready
အကယ်၍ သင်ရဲ့ Portfolio ဟာ အခုချိန်ထိ empty ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Project တွေကို ဆောင်ရွက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နှင့် ထည့်သွင်းတည်ဆောက်နိုင်ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ပြည့်စုံတဲ့ Portfolioကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် Clients တွေကလာပြီးဆက်သွယ်တဲ့အချိန်ထိ စောင့်မနေပါနဲ့။ မိမိနှင့် လက်လှမ်းမှီရာ Projectများကို လက်ခံလုပ်ဆောင်ရင်း မိမိ Portfolio ကိုဖြည့်စွက်သွား သင့်ပါတယ်။ သင်ဟာ Beginner တစ်ယောက်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ လေ့လာရင်း၊ လေ့ကျင့်ရင်းဖြင့် အထင်ကြီး စရာကောင်းတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး မိမိရဲ့ ကျွမ်းကျင်ရာ၊ တက်မြောက်ရာ အပိုင်းတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရင်း အကောင်းဆုံး Portfolio တစ်ခုကို ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။